मुख काे क्यान्सरकाे प्रारम्भिक लक्षण | कारण र उपचार - समाज डेण्टल - Samaj Dental
मुख काे क्यान्सरकाे प्रारम्भिक लक्षण | कारण र उपचार – समाज डेण्टल
मुखको क्यान्सर भनेको के हो?
मुख भित्र हुने क्यान्सरलाई अंग्रेजीमा “माउथ क्यान्सर” भनिन्छ। मुखको क्यान्सर एक प्रकारको क्यान्सर हो जसले मुखलाई प्रभावित गर्दछ जसले ओठ, घाँटी वा जिब्रोलाई पनि असर गर्न सक्छ। यदि उपचार समय मा गरिएको छैन भने यो व्यक्ति को लागी घातक साबित हुन सक्छ। नेपालमा मुखको क्यान्सरका बिरामीहरुको संख्या बढ्दो छ। नेपालमा क्यान्सर को बारे मा मानिसहरुलाई सचेत बनाउन को लागी धेरै प्रयासहरु गरिएका छन। तर धेरै मानिसहरु क्यान्सर को समस्यालाई बेवास्ता गर्दछन , जुन पछि एक ठूलो समस्या बन्छ सक्दछ । क्यान्सर को उपचार को लागी शल्यक्रिया र थेरापी गर्ने गरिन्छ। हामी आज मुखको क्यान्सर को बारे विस्तृत रूपमा लेख्न गइरहेका छौँ ।
मुखको क्यान्सर को लक्षण के हो?
प्रारम्भिक मुखको क्यान्सर को लक्षण र संकेत अन्य समस्याहरु जस्तै छन्।
-मुखमा सेतो वा रातो दाग।
-निल्नमा कठिनाई रअचानक वजन घटाने।
-लामो समय सम्म मुखमा छाला काे रोग देखिने।
-घाँटी सुनिने ।
-असामान्य तरिकाले मुखबाट रगत बग्ने।
-मसालेदार खाना निल्दा घाँटी पोल्ने।
मुखको क्यान्सरको कारण के हो?
मुखको क्यान्सर हुनुका धेरै कारण हुन सक्छन्। हामीलाई यी कारणका बारेमा जान्न एकदम जरुरी छ।
मुखको क्यान्सर व्यक्तिको प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर भएको कारण हुन सक्छ। जसको प्रतिरक्षा शक्ति धेरै कमजोर हुन्छ , उनीहरु केहि समस्या बाट पहिलै पीडित हुन्छन।
सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग मुखको क्यान्सरको मुख्य कारण हो। यस बाहेक, केहि मानिसहरु जो अत्यधिक सुर्ती वा चुरोट पिउछन्, उनीहरु मुखको क्यान्सर को जोखिम मा रहन्छन्।
रक्सीको अत्यधिक सेवनले मुखको क्यान्सर हुन्छ। यदि रक्सी एक पटक खाइयो भने, यसमा कुनै विशेष प्रभाव हुँदैन , तर यदि एक दैनिकी र अत्यधिक रूपमा रक्सी पिउन थाले पछि यो कलेजो संग सँगै मुख को क्यान्सर को लागी पनि खतरा हुन सक्छ।
बट्टामा राखेको अचार, खाना वा एकपल्ट खाइसकेको तेल खानु हुँदैन, यो क्यान्सर को जोखिम को लागी उत्प्रेरक हुन सक्छ। यसैले हामीले हरीयो तरकारी, फलफूल वा नट आदि जस्तै स्वस्थ खाना हाम्रो खानामा समावेश गर्न सक्नुहुन्छ।
मुखको क्यान्सर ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस (HPV) भएका मानिसहरुलाई पनि हुन सक्छ। यही कारणले गर्दा ६-६ महिना मा
एक पटक आफ्नो स्वास्थ परीक्षण गराउनु पर्दछ।
मुखको क्यान्सरकाे परीक्षण कसरी गरिन्छ?
मुखको क्यान्सरको परीक्षणहरुका लागि विभिन्न प्रयोगहरु गरीन्छ। यी परीक्षणहरुमा तल उल्लेखित प्रकारहरू सामेल छन्।
पहिले व्यक्ति को एक शारीरिक परीक्षा गरिन्छ र पुरानो रोग को एक इतिहास तयार पारिन्छ। यस बाहेक, केहि अन्य परीक्षणहरु गरिन्छ जस्ले मुखको क्यान्सर पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ।
मुखको क्यान्सरको उपचार
लक्षणको आधारमा मुखको क्यान्सरको निम्न उल्लेखित तरिका बाट उपचार गरीन्छ।
रेडियोथेरापी – एक विकिरण जस्ले क्यान्सर का कोषहरुलाई नष्ट गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ। यो सामान्यतया सर्जरी पछि गरिन्छ । क्यान्सरको उपचार यसको आकार मा निर्भर गर्दछ जस्ले गर्दा यसलाई धेरै हप्ता या दिन लाग्न सक्छ।
केमोथेरापी – यो थेरापी क्यान्सर को कोशिकाहरुको डीएनएलाई क्षति गर्न को लागी गरीएको हुन्छ।
आन्तरिक रेडियोथेरापी – आन्तरिक रेडियोथेरापी, जसलाई ब्रेकीथेरापी पनि भनिन्छ, यसले सामान्यतया क्यान्सर को प्रारम्भिक चरणहरुमा क्यान्सर क्यान्सरलाई नष्ट गर्ने गर्दछ।
फोटोडायनामिक थेरापी – यो थेरापी एक धेरै प्रारम्भिक चरण मा गरिन्छ । यो एक अस्थायी उपचार प्रक्रिया हो | जब उपचार नहुने वा यदि बारम्बार मुखकाे अल्सर क्यान्सर मा परिणत भयो भने फोटो डाइनामिक थेरापी गरिन्छ।
मुखको क्यान्सर को जटिलताहरु :-
तपाइँले मुखको क्यान्सरको उपचारका लागी एक Oncologist लाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मुखको क्यान्सरको सही समयमा उपचार गर्नाले पछि निम्ताउने नकारात्मक परिणाम बाट जोगिन सजिलो हुन्छ ।
हाम्रो उद्देश्य तपाइँहरुलाई हाम्रो लेखको माध्यम बाट जानकारी दिनको लागी मात्र हो। हामी तपाइँलाई कुनै औषधि वा उपचार सल्लाह दिदैनौं। एक राम्रो डाक्टरले मात्र तपाइँलाई राम्रो सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ।